Mpanome fanampiana an'ny mpiasan'ny fanatanjahantena golf tsara indrindra, mpamatsy golf Feyond
Home > Products > Fanampiana golf
Amin'ity faritra ity dia hampiseho aminao ny mpanazatra golf, fitaovana fanofanana golf, fanampiana ara-piofanana ho anao hanampiana ny golf tsara, izahay dia nanao ireo vokatra fanampiana amin'ny fanampiana golf ireto, dia manana traikefa be dia be izahay, manana fitaovana 2 Hardware izahay Atrikasa ary ombin-tany 2, afaka manao ny famolavolana ny volanao ary ny sasany dia afaka manao ny volanao, mazàna ny famokarana famokarana dia ao anatin'ny 1 volana.Misy stock ary ny sasany tsy afaka mampiseho ny antsipiriany izay ilainao, azonao atao ny miantso anay, azonao atao ny miantso anay +8618813984783 Na alefaso amin'ny mailaka i Angelyanggolf@outlook.com.
mpanazatra golf mahery vaika
Ny asan'ny Overspeed Swing Golf Trainer; Function: The OverSpeed ​​Swing Trainer dia natao hanatsarana ny hafainganam-pandehananao ary manome fampihetseham-batana hozatra. Mampitombo ny fahombiazana izany ary manatsara ny filaharana eo am-pilalaovana golf mba hanomezana halaviran-dàlana lavitra ny tee. Ny mpanazatra haingam-pandeha golf Feyond dia mampitombo ny hafainganam-pandehananao miampy halavirana fanampiny nefa koa mivelatra ary mamorona tanjaka lehibe ao amin'ny hozatrao manome tombony fanampiny maro rehefa miezaka manatsara ny lalao golf ianao. 1 、 Manampy ny elanelam-baravarankely ； 2 、 Mandanjalanja mandanjalanja, & Tempo milomano ； 3 、 Hahafantarana ny fihazonana mba hanatsarana ny hafainganana amin'ny alàlan'ny fiantraikany ； 4 、 Mamorona làlana swinging mahery sy miverimberina ； 5 、 Mampitombo ny fahamarinana ur 6 、 manamafy & Fanitarana ny hozatry ny Golf ； 7 、 Manampy tanjaka, tsy fitoviana, ary fanamorana ny fihodinanao. Ahoana no ahazoanao tombony betsaka amin'ny mpanazatra hafainganam-pandeha golf Feyond anao? Amin'ny alàlan'ny fampihetsiketsehana ny mpanazatra amin'ny fihetsiketsehana miadana sy feno 6 eo ho eo amin'ny tany. Amin'ny fahavitan'ny fikororohana anao dia avelao ny lanjan'ny mpampiofana hampihetsiketsika ny tsirairay ary mihetsika tsy miato. Manaova savily 10 misesy tsy mijanona. Izany dia hahatonga anao hafana sy hanitatra ny hozatry ny golf swing nefa tsy miteraka ratra. Ataovy farafahakeliny seta 4 hahitanao valiny tsara indrindra ary hiala sasatra vetivety eo anelanelan'ny setaly tsirairay. Azonao atao ny manitsy ny isan'ny savily hifanaraka amin'ny haavon'ny fampihetseham-batanao. Ny fanampiana fanofanana haingam-pandeha dia natao hampiasaina isan'andro hahazoana valiny tsara indrindra, saingy afaka miovaova isan'andro ny fanaonao. Fiheverana: 1. Alohan'ny fampiasana tsirairay dia zahao ilay mpampiofana ary alao antoka fa miraikitra tsara ny lanjany 2.Milomano amin'ny toerana malalaka malalaka 3. Aza mampiasa na manazatra fanazaran-tena haingam-pandeha amin'ny manodidina ny olon-kafa. Ny antsipirian'ny mpiambina golf swing swing; Fitaovana: fitaovana: loha (vy vy, vy, aliminioma), tsorakazo (carbon fider), fihazonana (rubber) Size: Size: manaiky customization; 40 "44" 45 " lanjany: ekeo ny fanaingoana; 240g, 255g, 270g, 305g, 345g, 350g MOQ: 500 logo: fanao (lohany, hazo, kapoka)
Bara fampihetseham-panatanjahan-tena amin'ny fomba golf
Ny fiasan'ity bar golf swing ity; Fampiasana: natao indrindra ho an'ny vao manomboka mihazakazaka; Ny lohan'ny swing golf mavesatra dia mahatonga azy io tsy hihontsina kokoa, manosika ny fihetsiky ny vatana, manararaotra ny fihetsiketsehana fikorontanana, mety hanatsara ny fahatsapana swing, ny tanjaky ny sandry , ny hozatry ny andilam-panatanjahan-tena, koa afaka mamely ny baolina lavitra kokoa; Halava ny swing mba hahatratrarana hetsika azo antoka, ny fihenan'ny fiatraikany ambany dia manampy amin'ny fanafanana alohan'ny lalao. loha mavesatra mba hahafahanao mamely ny baolina tsirairay mora foana. Ny fihoaram-pefy fanampiny ao amin'ny hazo dia manampy amin'ny fanitarana ny fikororohana, manome anao hery bebe kokoa sy fifehezana tsara kokoa. golf Manafana ny fanampiana. Rehefa manetsiketsika ny mpanazatra ianao dia miteraka fiatraikany ambany amin'ny fampitomboana ny fahalalahana sy ny fihetsika. Ny tanjaky ny loha mavesatra dia mandrisika ny famindrana lanja mety, endrika nohatsaraina, fifandanjana afovoany ary hery lehibe kokoa. Mpanazatra golf tafahoatra. Atsipazo miverimberina i Baligh hahazoana valiny sy fanitsiana ny fahazaran-dratsy. Ny fihoarana mihoapampana dia mamela lagy mandritra ny fikororohana miverina manampy anao hahita ny tempo-nao. Ampiasao ity fanampiana mora fampiofanana ity 10-20 isan'andro mba hanatsarana ny lalao. Mpanazatra Golf mety tsara ho an'ny olona be atao: Afaka mitondra azy na aiza na aiza ianao ary manao fanazaran-tena andro aman'alina. Tsy misy fetra amin'ny scenario fampiasana toy ny habaka kely. Mpanazatra golf tsara ho an'ny vahoaka be olona an-drenivohitra! Ny antsipirian'ny golf Trainer Stick; Fitaovana: mampiasa ny vatan'ny tsatokazo fiarovana tontolo iainana izy io, manana ny elastika faran'izay mahery ny lohany, ny lohataona mandeha ho azy! Ny fitaovana lehibe indrindra dia ny loha (TPR / silicone + Pu tube) + hazo (fibre vera + fantsom-pohy) + fehikibo fingotra; Size: 40 '' / 45 '' / 48 '' Milanja: 750g eo ho eo
Mpanazatra swing golf
Ny asan'ny Swing Golf Trainer; Function: manitsy ny lanjany, fihetsika fanitsiana, fametrahana mazava tsara 1 、 Ity mpanazatra golf swing ity dia afaka manampy anao hahay tsara ny fomba fihetsika, manatsara ny tanjaky ny sandry ary mampitombo ny halaviran'ny mikapoka. Fitaovana tsy maintsy ananana ho an'ny fanazaran-tena ny vaoavao izy io! 2 、 Natao hanitsiana ny afovoany ambany ny gravity du swing, dia manome valiny tsara ho an'ny fanitsiana ny fihetsika. 3 、 Ny lohan'ny savily dia manana lanjany azo ovaina sy fangejana miendrika tanana mba hanamafisana orina ilay swing 4 、 Tonga lafatra amin'ny fanatsarana ny fahaizanao mametraka golf, mora ampiasaina. 5 、 Comprehensive: Ampifanaraho amin'ny karazana swing sy golf golf rehetra. 6 、 Fihazonana fingotra tonga lafatra, ahazoana aina ary tsy mitosaka. Tsorakazo mateza, mateza, tsy harafesina. Fampiharana: golf swing, putt training, novice training, ambany afovoan'ny gravity design, esorina ireo singa, lanjan-doha azo ahitsy; Izy io dia manana endriny tsara tarehy: zebra pattern grip tsara tarehy ip Gratuit aorin-tànana aorina tsara eo an-tànana position toerana eo am-pelatanana eo anoloana, tsy-slip ary mahazo aina, fanalahidy raikitra eo an-damosina, toerana famotsorana marina. Ny lanjan'ny lohan'ilay tehina dia mety ahitsy ， Ary ny fihazanan'ny tànana dia ahafahanao mamantatra tsara ny toerana fihazonana azy, mampitombo amin'ny fomba mahomby ny herin'ny sandry ary mampitombo ny halaviran'ny lalan-dra. Fitaovana ilaina amin'ny fanazaran-tena ho an'ireo vao manomboka. Abstract: Ity taratasy ity dia manolotra ny antsipirihany sy ny asan'ny mpanazatra golf swing Ny antsipirian'ny mpampiofana golf swing; Fitaovana: lohany + hazo (vy nopetahany Chrome), fihazonana (fingotra) Size: halavany: 66cm; Loha: 8cm; Milanja: manodidina ny 0.9kg MOQ: 100pcs paking: 1pcs / pp, 25pcs / baoritra; 70 * 20 * 20cm
Kalitao avo lenta New golf golf putter corrector Wholesale- 深圳 市 飞 羊 运动 用品 有限公司
Mpandrindra golf putter endrika vaovao Function: * Manitsy am-pahombiazana ny fihetsika putter golf * mandrisika ny intrest golf * manatsara ny fahaizan'ny golf * Miaina ny fihetsika fampiharana fanao amin'ny filokana Endri-javatra: * endrika famolavolana * Ny famolavolana ergonomika dia mifanaraka amin'ny fiolahana vatan'olombelona * ampiasaina tsara amin'ny 3 segondra * maivana sy matanjaka daholo ny tsorakazo alu * makà toerana kely azo apetraka ao anaty harona golf nalamina * azo ampiasaina samy anaty trano & ivelany Fitaovana: fitaovana Aluminun + plastika. Jiro & matanjaka） Diameter: Extimetatra max savaivony 51cm & nakatona hatramin'ny 29cm Milanja: 200g MOQ: sets 300 Haben'ny fonosana: 560 * 360 * 120MM (50pcs isaky ny boaty) sary famantarana: namboarina
Mpanazatra swing golf mafana amidy
Mpanazatra Feyond Golf swing miaraka amin'ny feo, afaka mamela anao hankafy ny lalao golf, ity dia endrika sy varotra mafana, satria manana feo lehibe be izy rehefa milalao azy isika, manana habe roa isika, 95cm ny iray, afaka mifanaraka amin'ny ankizy sy ny vehivavy izy io ny iray hafa dia 115cm, mety ho an'ny lehilahy. ity karazana golf swing triainer ity dia hamela anao hahatsapa ho tsara kokoa noho ny fanampiana golf hafa, matokia ahy, andramo! Size: 95cm / 115cm Logo: Afaka asiana sticker amin'ny hazo Fitaovana: Loha ： EVA, Shaft: fibre matevina, Grip: Rubbe Tokony: 300g MOQ: 100pcs fonosana: 1pcs / pp, 30pcs / baoritra; 127 * 26 * 28cm
HighQuality Golf swing stick miaraka amina Wholesale Wholesale- 深圳 市 飞 羊 运动 用品 有限公司
Ny fiasa sy ny toetran'ny tsipika swing swing Golf Function: * Manitsy am-pahombiazana ny fihetsika putter golf * Manentana ny intrest golf * Manatsara ny fahaizan'ny golf * Hiaina ny fihetsika fampihetseham-batana mety Endri-javatra: * Hanavao ny lohan'ny klioba, tsara tarehy sy lamaody kokoa * Amin'ny alàlan'ny slider magnet dia haneno mafy izany raha marina ny fihetsika swing * Ny tanjaky ny savily azo ovaina, rehefa mitombo ny tanjaky ny savily noho ny fitomboan'ny isa * Makà toerana kely azo apetraka ao anaty kitapo golf izay namboarina * Azo ampiasaina na anaty trano na ivelany * Ity tsipika swing golf ity dia natao hihaona amin'ny toerana mety misy ny vatan'olombelona mamela anao hanao fampiharana ilay savily rehefa ny mahazatra kokoa amin'ny fihetsika mety Fitaovana: Metal + Rubber Halavany: 77cm (halavan'ny fihazonana: 25cm) Milanja: 555g MOQ: 100sets logo: namboarina Olona azo ampiharina: vao manomboka
Feyond Golf swing trainer miaraka am-peo
Ny fiasan'ny GOLF SWING TRAINER; Ity karazana Feyond Golf Training Aid ity dia manana maodely dimy hanodinana swing streng. Ity habe ity dia habe mahazatra, raha te hanana habe hafa ianao dia afaka mandanjalanja koa izahay. * Azonao atao ny mampihatra ny maody ny mpamily, ny vy ary ny wedge amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny hafainganam-pandehan-doha. * Manaova fampiharana golf swing na aiza na aiza ao an-trano na any ivelany. * Azonao atao ny mamantatra ny faritra misy ny fiatraikany. * Mahatsapa ny feo "Tsindrio" eo amin'ny faritra misy fiantraikany aorian'ny fikorontanana, ary henoy indray ny feo "Tsindrio" amin'ny fihetsika marina * Ity fampiofanana ity ho an'ny fanazaran-tena Rhythm / tempo / distance / impact / * Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny seho haingam-pandeha (mizana) amin'ny dial, azonao atao ny mamantatra ny tena fiatraikany sy ny fampiharana Azo ampiharina amin'ny klioba ihany koa ny tifitra vy / hazo / mpamily. * Fantaro ny toerana misy ny fiatraikany amin'ny alàlan'ny feo (Azonao atao ny mampihatra famerimberenana amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fotoana marina amin'ny hafainganam-pandehanao rehefa misy vokany.) * Izy io dia manampy amin'ny fitazomana ny gadona swing sy ny tempo. (Amboariny ny hafainganam-pandehan'ny loha mba hanampiana anao hampihatra ny halaviran'ny halaviranao manatona ny gadona sy tempo milamina tsara indrindra.) * Ny fiakaran'ny halaviran-dàlana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny tanjaka hozatra tsara (Ny fampihetseham-batana miverimberina dia mamolavola hozatra tsara mba hahatadidy ny fihetsiketsehana mandritra ny fikororohana Manampy anao hanao tifitra milamina sy marina eny an-tsaha) * Vokatry ny fanatanjahan-tena mamelatra (Miezaha mikorisa moramora toy ny lanjan'ny loha alohan'ny fihodinana. * Azonao atao ny mizatra milomano golf amin'ny toerana rehetra na any anaty na ivelany. * Azonao atao ny mahita ny gadon'ilay fikorontanana amin'ny alàlan'ny feon'ny fiatraikany ary zahana ny faritra misy ny fiatraikany. * Azonao atao ny manamboatra ny hafainganam-pandehan'ny lohanao mba hahafahanao mampihatra vy / hazo / mpamily ary hanatsara ny tanjaky ny savily. * Azonao atao ny manao fampihetsiketsehana amin'ny alàlan'ny fanatonana basy lavitra. Ny antsipirian'ny mpanazatra golf swing loatra; Fitaovana: Head (plastika + fibre), Shaft (Aluminium + firaka), Grip (Rubber) Size: halavany: 76cm Milanja: manodidina ny 535g MOQ: 10 pcs Color: Yellow, Red, Green, Orange
3 Safidy Safidy baomba baoritra Golf mpiambina swing golf
Function: * fihetsika ahitsy * selfcehck ary manatsara ny hafainganam-pandeha sy ny hafainganam-pandeha * fanatanjahan-tena hozatra fototra * mamaha ny baolina mivalona ary mamely ny sisin-dàlana REHEFA misokatra ny baolina * manaova soa aman-tsara * hafana Endri-javatra: 1.lavily lava kokoa: manatsara ny fahatsapana fikorontanana (hamafiso ny sandry) 2.zatra hozatra 3. mikapoka lavitra ny baolina 4. lohan'ny club trainer swing swing golf mavesatra ~ 500g, tsy fanatanjahan-tena lehibe kokoa dia afaka mitondra ny vatana hihetsika, fahatsapana fa misy swing kokoa 5.Fampihetseham-batana & fandrindrana: vatana mavesatra loha hitondra vatana mba hikorisa 6.fomba fampihetseham-bola golf dia afaka manamarina raha marina ny fihetsiketsehanao sy ny hafainganao 7.mety ho an'ny mpilalao marobe: LADIES, MEN AND PLAYERS TANORA Fitaovana: Hascrome + ABS Halavany: 920MM / 36INCH Milanja: 750G MOQ: 100sets logo: namboarina Olona azo ampiharina: vao manomboka
Mini Golf swing trainer mini Avy amin'ny mpanamboatra Feyond
Golf dia fanatanjahan-tena ara-teknika, ary sarotra ny milalao tsara raha tsy misy fiofanana matihanina sy mpanazatra golf swing mety, golf swing trainer mini, golf trainers aids. Shenzhen Feyond Sports Co., Ltd dia mampahafantatra anao ny mini trainer swing indrindra ho anao. 1, Mijoroa tsara, ny mpampiofana anay dia manampy anao amin'ny fanitsiana ny fiorenan'ny swing ary manatsara ny fahaizan'ny baolina. Ny tanjon'ny fankafizana golf dia ny fahalalana ny fomba hikapohana ny baolina, ary ny fijoroana marina no fiandohan'ny tifitra lavorary. Ny fijoroana mahazatra mahazatra dia ny mijoro manatrika ny baolina, ny sakany sorony soritra, ny lohalika somary miondrika, ny vatany ambony somary mirona mankany amin'ny baolina, mihidy mafy ny valahany, ny tanana mitazona ny klioban'ny golf, ny maso mifantoka amin'ny baolina. 2, atsipazo ny sandrinao, ity savily ity dia manana loha mavesatra be loatra, manatsara ny fahatsapana ny fikorontanana, manatsara ny tanjaky ny sandry, mampihatra ny hozatry ny andilana Atsofohy amin'ny hery ny klioba. Atsangano avy eo anilanao ny klioba, andramo atsangana avy eo an-doha aloha, ary afatory miaraka aminy ny tananao, ny tananao ary ny sorokao. Rehefa tapitra ilay savily dia ahodino ny valahanao, izay hamela ilay savily hanan-kery ambony indrindra raha mitazona ny lanjanao. 3, atsangano ny klioba, misy fantsom-by fibre Glass izay tsara ho an'ny fanatanjahan-tena hanamafisana ny hozatra fototra. Rehefa vita ny fikorontanan'ny sandry, ny lanjan'ny vatana dia mifantoka amin'ny sisin'ny baolina, ary miondrika ny hato-tanana ka manondro ny arabe ny lohan'ny club, ary mijanona kely eo ambonin'ny lohanao any aorian'ny lohanao. 4, mikapoka ny baolina amin'ny klioba, ny gripa vita amin'ny fingotra tsara indrindra dia azo alaina ho an'ny havia sy havanana karazana misy; concave tsy convex non-slip; manakana tsy ho solafaka.
Mpanazatra swing golf tsara indrindra miaraka amin'ny vidin'ny Factory- Mpamatsy
Ny antsipirian'ny mpampiofana golf swing; Fitaovana: lohany (vy tsy misy fangarony / Fametahana vy), Vodin-tsolika: fibre matevina, fangejana (rubber) Size: halavany: 90 / 100cm; Diameter: 28mm; Lanja: manodidina ny 0,6 / 0,66kg MOQ: 1 pcs paking: 1 pcs / pp, 25pcs / baoritra; 110 * 14.5 * 14cm Ny asan'ny Swing Golf Trainer aids; Ny sary faran'izay tsara dia tsara tarehy mahatonga ny fihazonana ho tsara tarehy kokoa; rehefa marina ny fihetsika fikorontanana ary ampy ny tanjaka, dia maneno ny loha club, hanatsara ny tanjaky ny fikororohana izany raha ampiasaina matetika; ny loha mavesatra sy ny metaly mavesatra, ny lanjan'ny metaly mavesatra dia 0,66 kg, mampihena ny vy metaly sy lohataona: 0.615kg; vatan'ny POM clud (mahatohitra fiatraikany miverimberina, tanjaka havizanan'ny havizanana, fikirizana ary henjana); Lengh: manodidina ny 90 / 100cm. ny loha mavesatra dia manampy amin'ny fampihetseham-pahefana sy ny savily tempo. , ahazoana aina ary tsy mitosaka. Tsorakazo mateza, mateza, tsy maharitra - tonga amin'ny volomboasary, mavo, maitso, manga, ary azonao atao ihany koa ny misafidy ny hanamboarana loko hafa! Ahoana no ahazoana tombony betsaka amin'ny mpanazatra hafainganam-pandeha golf anao Atombohy amin'ny lanja rehetra mifatotra amin'ny alàlan'ny fanindronana ny mpanazatra amin'ny fihetsiketsehana miadana sy feno 6 santimetatra miala ny tany. Amin'ny fahavitan'ny fikororohana anao dia avelao ny lanjan'ny mpampiofana hampihetsiketsika ny tsirairay ary mihetsika tsy miato. Manaova savily 10 misesy tsy mijanona. Ity dia mampihetsi-po anao ary manitatra ny hozatry ny golf swing nefa tsy miteraka ratra. Ataovy farafahakeliny seta 4 hahitanao ny valiny tsara indrindra ary hiala sasatra vetivety eo anelanelan'ny setra tsirairay. Fitaovana lehibe hanatsarana ny fototra iorenanao ary hahatsapanao izany. te hihazona ny klioban'ny golf tahaka ny mpilalao mahay indrindra manerantany.
mpanazatra golf swing miaraka amin'ny lohany azo ovaina
Ireo fiasa & Fampisehoana mpanazatra golf swing Function: * fihetsika mety * mandiniha tena ary manatsara ny hafainganam-pandeha sy ny hafainganam-pandeha * manazatra hozatra fototra * mamaha ny baolina mivalona ary mamely amin'ny sisin-dàlana REHEFA misokatra ny baolina * manaova fanazaran-tena tsara * hetsika famanam-batana Endri-javatra: 1. loha roa azo ovaina, iray raikitra, iray azo esorina Fihodinana lava kokoa: manatsara ny fahatsapana fikorontanana (hamafiso ny sandry) 3. manatsara ny tanjaky ny sandry 4.zatra hozatra 5. loha mavesatra golf train swing swing club ~ 500g, tsy fanatanjahan-tena lehibe kokoa dia afaka mitondra ny vatana hihetsika, fahatsapana fahefan'ny swing 6.Hetsika fampihetseham-batana & fandrindrana: vatan-doha mitarika lohan'ny baolina mavesatra kokoa mba hikoropahana 7.fampizarana golf swing bar dia afaka manamarina raha ny hetsika ataonao & marina ny hafainganana Ny antsipirian'ny mpampiofana golf swing Fitaovana: lohany vy tsy misy fangarony + hazo fibre matevina + fangejana fingotra Halavany tanteraka: 720MM Milanja: ~ 500G MOQ: sets 300 Logo: namboarinaPackage: kitapo 1pc / opp, 25pcs / baoritra habe amin'ny carton: 111 * 14.5 * 4cm lohan-doha: 3piasa, 50g / 70g / 110g, Malalaka atambatra ireo olona azo ampiharina: vao manomboka
Golf swing bar golf swing trainer
Mpanazatra golf swing Mini avy any Feyond Golf dia fanatanjahan-tena ara-teknika, ary sarotra ny milalao tsara raha tsy misy fiofanana matihanina sy mpanazatra golf swing mety, golf swing trainer mini, golf trainers aids. Shenzhen Feyond Sports Co., Ltd dia mampahafantatra anao ny mini trainer swing indrindra ho anao. 1, Mijoroa tsara, ny mpampiofana anay dia manampy anao amin'ny fanitsiana ny fiorenan'ny swing ary manatsara ny fahaizan'ny baolina. Ny tanjon'ny fankafizana golf dia ny fahalalana ny fomba hikapohana ny baolina, ary ny fijoroana marina no fiandohan'ny tifitra lavorary. Ny fijoroana mahazatra mahazatra dia ny mijoro manatrika ny baolina, ny sakany sorony soritra, ny lohalika somary miondrika, ny vatany ambony somary mirona mankany amin'ny baolina, mihidy mafy ny valahany, ny tanana mitazona ny klioban'ny golf, ny maso mifantoka amin'ny baolina. 2, atsipazo ny sandrinao, ity savily ity dia manana loha mavesatra be loatra, manatsara ny fahatsapana ny fikorontanana, manatsara ny tanjaky ny sandry, mampihatra ny hozatry ny andilana Atsofohy amin-kery ny klioba. Atsangano avy eo anilanao ny klioba, andramo atsangana avy eo an-doha aloha, ary afatory miaraka aminy ny tananao, ny tananao ary ny sorokao. Rehefa tapitra ilay savily dia ahodino ny valahanao, izay hamela ilay savily hanan-kery ambony indrindra raha mitazona ny lanjanao. 3, atsangano ny klioba, misy fantsom-by fibre Glass izay tsara ho an'ny fanatanjahan-tena hanamafisana ny hozatra fototra. Rehefa vita ny fikorontanan'ny sandry, ny lanjan'ny vatana dia mifantoka amin'ny sisin'ny baolina, ary miondrika ny hatotan-tanana mba hanondro ny lohan'ny club eo amin'ny arabe, farany mijanona kely eo ambonin'ny lohanao any aoriana ny lohanao. 4, mikapoka ny baolina amin'ny klioba, ny gripa vita amin'ny fingotra tsara indrindra dia azo alaina ho an'ny havia sy havanana karazana misy; concave tsy convex non-slip; manakana tsy ho solafaka. Ny antsipirian'ny mpampiofana swing golf antsika: Halava: 68cm Lanja: 0.75kg fonosana: kitapo 1 pc / opp ao anaty boaty fanomezana, 40pcs / baoritra Haben'ny boaty: 60 * 21 * 16cm